Recollection ကိုမြှင့်တင်နေစဉ်အသစ်အဆန်းရှာဖွေစုဆောင်းသူများအတွက်ဆုပေးသည့်စနစ်နှင့် Hippocampus ကိုမျှော်လင့်ခြင်း (၂၀၀၇) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်
လက်ဆောင်ပစ္စည်းအသစ်အဆန်းလူသစ်တွေဆုကြေးစနစ်နှင့် Hippocampus ၏မျှော်လင့်စာမျက်နှာ (2007) မြှင့်တင်ရေးနေစဉ်
အပြည့်အဝလေ့လာမှု: အသစ်အဆန်းတပ်သားသစ်ဆုလာဘ်စနစ်၏ရှိလာခြင်းနှင့် hippocampus စာမျက်နှာမြှင့်တင်နေစဉ်
Neuroimage ။ 2007 အောက်တိုဘာ 15; 38 (1-9): 194-202 ။
Bianca C. Wittmann, Nico Bunzeck,b ရေမွန်ဂျေ Dolan,a နှင့် Emrah Düzelb,c,⁎
အဆိုပါ substantia nigra နှင့် ventral tegmental ဧရိယာ (SN / VTA) ပါဝင်သည်သော dopaminergic midbrain, ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ဤဒေသကိုလည်းအသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်အလုပ်လုပ်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိများ shared သောဖြစ်နိုင်ခြေပြုစုပျိုးထောင်, ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် activated ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ SN / VTA အတွက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏အလုပ်လုပ်တဲ့ရှုထောင့်, အမည်ရ, ဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းမျှော်လင့်မထားတဲ့ဆုလာဘ်များနှင့်တွေကိုအားဖြင့် activation လည်းအသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့လက္ခဏာရှိမရှိလက်ရှိမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။ ဤမေးခွန်းကိုဖြေရှင်းရန်ကျနော်တို့ဘာသာရပ်များ 75% တရားဝင်မှုနှင့်အတူမြင်ကွင်းများ၏ဝတ္ထုသို့မဟုတ်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်စေပုံရိပ်တွေခန့်မှန်းကြောင်းသင်္ကေတတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးရာစဉ်အတွင်းတစ် fMRI စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ SN / VTA ဝတ္ထုပုံရိပ်တွေခန့်မှန်းတွေကိုအားဖြင့်အဖြစ်တစ်ဦး '' မမျှော်လင့်ဘဲအသစ်အဆန်း '' တုံ့ပြန်မှုကျွမ်း-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုနောက်တော်သို့လိုက်စေသည်မျှော်လင့်မထားတဲ့ဝတ္ထုပုံရိပ်တွေအားဖြင့် activated ခဲ့ကွောငျးဖျောပွပါ။ အဆိုပါ hippocampus, ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုဖော်ထုတ်မယ်နှင့် encoding ်ပတ်သက်နေတဲ့ဒေသတစ်ခု anticipatory အသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်မှုပြသပေမယ့်တုံ့ပြန်မှုမျှော်လင့်ထားရန်ရလဒ်ကိုမှာတုံ့ပြန်အတွက် SN / VTA ၏ပရိုဖိုင်းနဲ့ 'မမျှော်လင့်ဘဲ' 'အသစ်အဆန်းအနေဖြင့်ကွဲပြားပါတယ်။ မျှော်လင့်မထားတဲ့ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူမျှော်လင့်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်နှောင့်နှေးအသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်နှိုင်းယှဉ်အခါစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအမူအကျင့် extension ကိုခုနှစ်, စာမျက်နှာကျွမ်းမှဆွေမျိုးတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားဒေတာဆုလာဘ်ထားချက်အရနှင့်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုထားချက်အရမှ SN / VTA တုံ့ပြန်မှုအတွက်ဆင်တူရိုးမှားထုတ်ဖေါ်။ ကျနော်တို့ကဒီ anticipatory တုံ့ပြန်မှု codes တွေကိုအတူတကွ hippocampus ၏ anticipatory activation အတူဝတ္ထုဖြစ်ရပ်များ၏တိုးမြှင် encoding ကမှဦးဆောင်, တစ်စိတ်ခွန်အားနိုးရှာဖွေတူးဖော်ခွင့်အသစ်အဆန်း signal ကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ပိုပြီးယေဘုယျစည်းကမ်းချက်များကိုမှာ data တွေကိုအသစ်အဆန်း၏ dopaminergic အပြောင်းအလဲနဲ့သစ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာ၏တူးဖော်ရေးကားမောင်းအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
လူသားများတွင်တိရစ္ဆာန်များနှင့်မကြာသေးမီကအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) လေ့လာမှုများအတွက် single-အာရုံခံဆဲလျအသံသွင်းခြင်း (SN / VTA midbrain ဒေသမသာဆုလာဘ်များက activated ကြောင်း convergence သက်သေအထောက်အထားပေးSchultz, 1998) ဒါပေမယ့်လည်းဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ပင်အားဖြည့်များ၏မရှိခြင်းအတွက် (Schultz et al, 1997 ။ Schott et al, 2004 ။ Bunzeck နှင့် Duzel, 2006) ။ အသစ်အဆန်းများက SN / VTA activation အသစ်အဆန်းအခ်ါအကြိုးဂုဏ်သတ္တိများရှိအံ့သောငှါဖြစ်နိုင်ခြေပေါ်ပေါက်။ သို့ဆိုလျှင်ဤကဲ့သို့သောအေးစက်အတွက်တုံ့ပြန်မှုများ၏ယာယီပြောင်းကုန်ပြီအဖြစ်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ဝိသေသလက္ခဏာများ, လည်းအသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့အကိုင်သင့်ပါတယ်။ တစ်ဦးကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်နောက်ဆက်တွဲဆုလာဘ်ပေးပို့အကြားအရေးပေါ်သင်ယူခဲ့ပြီးသည့်အခါဆုလာဘ်မျှော်လင့် Paradigm ခုနှစ်, dopaminergic အာရုံခံကုဒ်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်း။ အထူးသညျဤအာရုံခံ (ဆုလာဘ်၏ပထမဦးဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောခန့်မှန်းဖို့ပေမယ့်မရှိတော့ဆုလာဘ်လက်ခံရရှိတုံ့ပြန်Ljungberg et al, 1992 ။ Schultz et al, 1992, 1997 ။ Schultz, 1998) ။ အဆိုပါ SN / VTA အတွက်အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့လည်း, ဤဆုလာဘ်-related ဂုဏ်သတ္တိများကိုပြသရှိမရှိမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ hippocampus (ဝတ္ထုဖြစ်ရပ်များအတွက် Episode ရေရှည်မှတ်ဥာဏ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်Vargha-Khadem et al, 1997 ။ Duzel et al ။ , 2001) နှင့် SN / VTA အတွက်အသစ်အဆန်း signal ကိုများအတွက်အဓိက input ကိုပေးယုံကြည်သည် (Lisman နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2005) ။ SN / VTA အာရုံခံခြင်းဖြင့်ဖြန့်ချိ Dopamine, အလှည့်အတွက်ရေရှည်အလားအလာ (LTP) နှင့် hippocampal ဒေသ CA1 အတွက်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ (, LTD) (တည်ငြိမ်နှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အတွက်အရေးပါဖြစ်ပါသည်Frey et al, 1990, 1991 ။ Huang ကနှင့် Kandel, 1995; Sajikumar နှင့် Frey, 2004; သံပုရာနှင့် Manahan-Vaughan, 2006; ပြန်လည်သုံးသပ်မြင်ဘို့ ဂျေး, 2003) ။ fMRI data တွေကိုပူးတွဲ SN / VTA နှင့် hippocampal activation (အောင်မြင်သောရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသကြSchott et al ။ , 2006) နှင့်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှု encoding ကအတွက်ဆုလာဘ်-related တိုးတက်မှု (Wittmann et al, 2005 ။ Adcock et al ။ , 2006) ။ ထိုကဲ့သို့သောဆုံအထောက်အထားအလငျး၌, hippocampus-မှီခိုမှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏မကြာသေးမီမော်ဒယ်များ (အ SN / VTA မှပေါ်ပေါက်အသစ်အဆန်း-သွေးဆောင် dopaminergic မော်ဂျူခြင်းဖြင့် hippocampal plasticity ၏ hippocampus နှင့်တိုးမြှင့်အတွက်အသစ်အဆန်းထောက်လှမ်းအကြားတစ်ဦး functional relationship ကိုအလေးပေးLisman နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2005) ။ ထို့ကြောင့် SN / VTA အသစ်အဆန်းထားချက်အရခြင်းဖြင့် activated ဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိဆိုတဲ့မေးခွန်းကို hippocampal plasticity ၏ယန္တရားများကိုင်စွဲဖို့အသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်များအကြားဆက်ဆံရေး၏အယူအဆရေးရာနားလည်မှုကျော်လွန်တတ်၏။ ထို့အပွငျကမကြာသေးမီက (SN / VTA အတွက်အသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်-အပြောင်းအလဲနဲ့အကြားဆက်ဆံရေးကိုနားလည်လှုံ့ဆျောမှု, အသစ်အဆန်း-ရှာကြံအပြုအမူနှင့်ရှာဖွေရေးအကြားလင့်များထုတ်ဖေါ်အံ့သောငှါအကြံပြုထားသည်Bunzeck နှင့် Duzel, 2006; Knutson နှင့် Cooper က, 2005).
ကျနော်တို့ (ဆုလာဘ်မျှော်လင့်လုပျထုံးလုပျနညျးအပျေါမှာလုပ်ပါတယ်တစ်ခု fMRI ပါရာဒိုင်းအတွက်ဝတ္ထုနှင့်အကျွမ်းတဝင်လှုံ့ဆော်မှုမှ anticipatory တုံ့ပြန်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးသဖန်းသီး။ 1) ။ အရောင်ရင်ပြင်ဝတ္ထု၏နောက်ဆက်တွဲတင်ဆက်မှုသို့မဟုတ်မြင်ကွင်းများ၏ယခင်က familiarized ပုံရိပ်တွေခန့်မှန်းကြောင်းတွေကိုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များအသီးအသီး cue မှတက်ရောက်ရန်ညွှန်ကြားထား, ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲ image ကိုအကျွမ်းတဝင်သို့မဟုတ်အသစ်ခဲ့ရှိမရှိအဖြစ်လျင်မြန်စွာနှင့်တိကျစွာတတ်နိုင်သမျှညွှန်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါ fMRI စမ်းသပ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားလိုအပ်သည့်အဖြစ်, ငါတို့သည်လည်းရုံးတင်စစ်ဆေးနံပါတ်များကိုမှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်တစ်ဦးသိကျွမ်း / သတိရပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးအသစ်အဆန်းများမျှော်လင့်နေဖြင့်ထိခိုက်ခဲ့ပုံကို Episode အကဲဖြတ်ရန်ပိုပြီးအကောင်းဆုံးခဲ့ကြသည်ထားတဲ့အတွက်သက်သက်သာအပြုအမူဗားရှင်းကောက်ယူ (Tulving, 1985).
စမ်းသပ်ဒီဇိုင်း။ လေ့လာမှုအဆင့်များအတွက် (က) စမ်းသပ် sequence ကို။ တစ်ဦးရင်းနှီးကျွမ်းအဆင့်ပြီးနောက်ရောင်စုံတွေကိုတစ်ဦးအကျွမ်းတဝင်သို့မဟုတ်အသစ်ရုပ်ပုံနောက်တော်သို့လိုက်ရှိမရှိ 75% တစ်ခုတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းသားများကိုဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် ပတ်သက်. အသိပေးနှင့်ညွှန်ပြခိုင်းတယ် ...
ကျန်းမာသောလူကြီးဆယ့်ငါးယောက် (ဆိုလိုသည်မှာအသက် [± SD] ၂၄.၅ ± ၄.၀ နှစ်၊ လက်ယာအားလုံး၊ ၇ ယောက်ျား) သည်စမ်းသပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ ပါ ၀ င်သူအားလုံးသည်ပါ ၀ င်ရန်အတွက်အသိပေးအကြောင်းကြားစာကိုစာဖြင့်ပေးပြီးလေ့လာမှုကိုမက်ဒ်ဘာ့ဂ်တက္ကသိုလ်၊ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကော်မတီ၏လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ပုံမှန်တောက်ပနှင့်အတူ Greyscale ရှုခင်းဓာတ်ပုံ 245 ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုအတွက်ရွေးချယ်ထားသောဓာတ်ပုံငါးပုံပုံနှိပ်ခြင်းအပါအဝင်စာဖြင့်ရေးသားထားသောညွှန်ကြားချက်များရရှိခဲ့သည်။ စကင်နာကိုမထည့်သွင်းမီ၊ ထိုရုပ်ပုံများကိုကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်တွင်ရှစ်ကြိမ်ကျပန်းအစဉ်လိုက်ပြသခဲ့သည် (ကြာချိန် - ၁၅၀၀ မစ်၊ အိုင်အက်စ် - ၁၂၀၀ မစ်) - သင်တန်းသားများကိုဂရုတစိုက်ကြည့်ရှုရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ စကင်နာတွင်, ခန္ဓာဗေဒနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်နှစ်ခုလုံးကိုစုဆောင်းခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများသည် ၅.၇ မိနစ်ခန့်ကြာသောအစည်းအဝေး ၁၂ ခုတွင်ပါ ၀ င်သူများဖြစ်ပြီး ၄ င်းသည် ၄.၁ မှ ၁၂ မှ ၁၂ အထိကြာသောစမ်းသပ်မှုများဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုစီတိုင်းတွင်ပါဝင်သူများသည်အောက်ပါရုပ်ပုံသည်အကျွမ်းတဝင်ရှိမည်လား (သို့) ဝတ္ထုရှိမရှိ ၇၅% တိကျမှုနှင့်အတူအဝါရောင်သို့မဟုတ်အပြာရောင်စတုရန်း (1500 ms) ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။ သဖန်းသီး။ 1အလုပ်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များအတွက်တစ် ဦး က) ။ အမျိုးမျိုးသောနှောင့်နှေးမှု (0-4.5 s) ပြီးနောက်စမ်းသပ်မှု၏ ၇၅% တွင်ခန့်မှန်းထားသည့်အမျိုးအစားမှရုပ်ပုံကိုပြသခဲ့သည်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသောအမျိုးအစားမှပုံတစ်ပုံ၊ အကျွမ်းတ ၀ င်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အကျွမ်းတ ၀ င်ရှိခြင်းအရ ၀ တ္ထုကို ၂၅ တွင်ပြသခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု၏% (75 ms) ။ နှစ် ဦး စလုံးအမျိုးအစားများကိုအညီအမျှမကြာခဏပြသခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းသားများကိုဤပုံသည်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောအမျိုးအစားမှဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ကိုအမြန်ခလုတ် နှိပ်၍ (ညာ (သို့) လက်ဝဲလက်ညှိုးသို့မဟုတ်အလယ်လက်ချောင်း) ကိုညွှန်ပြသည်။ variable 25 ကိုကြာချိန်၏ fixation အဆင့် (1500-1.5 s) နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ဓာတ်ပုံအမျိုးအစားတစ်ခုစီနှင့်ဆက်စပ်သည့်အရောင်များကိုပါ ၀ င်သူများ၊ တုံ့ပြန်သည့်လက်နှင့်လက်ချောင်းများကိုအမျိုးအစားများသို့ညှိနှိုင်းခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁.၂ s TR နှင့် ၃၀ မိုင် TE နှင့်အတူ 226 T Scanner (Siemens Magnetom Trio, Erlangen, Germany) တွင် session တစ်ခုအတွက်ပဲ့တင်သံပုံရိပ် (EPI) ၂၂၆ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့သည်။ ပုံရိပ်များတွင်အလယ်အလတ် ဦး နှောက်၏ longitudinal axis (၂၄ ချပ်) ပါဝင်သည် (3 × 1.5 matrix; မြင်ကွင်း - ၁၉.၂ စင်တီမီတာ; voxel အရွယ်အစား - ၃ × ၃ × ၃ မီလီမီတာ) - အပြန်အလှန်လှည့်ပတ်စီးဆင်းနေသည်။ ဤတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း volume သည် hippocampus, amygdala, brainstem (diencephalon, mesencephalon, pons နှင့် medulla oblongata အပါအဝင်) နှင့် prefrontal cortex ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။ နားကြပ်များနှင့်စကင်နာဆူညံသံကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးဘာသာရပ်ခေါင်း၏လှုပ်ရှားမှုများကိုအမြှုပ်များဖြင့်လျှော့ချသည်။ လှုံ့ဆော်မှုဆက်တိုက်နှင့်အချိန်ကိုက် cue- နှင့်ရလဒ် -related hemodynamic တုံ့ပြန်မှု (ယုံကြည်စိတ်ချရသောခွဲခြာနှင့်ပတ်သက်။ ထိရောက်မှုများအတွက် optimized ခဲ့ကြသည်Hinrichs et al ။ , 2000) ။ တစ်ခုပြောင်းပြန်လှန်ပြန်လည်နာလန်ထူ EPI sequence ကို (IREPI) ပုံမှန်တိုးတက်စေရန်တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ scanning parameters တွေကိုပု EPI sequence ကိုများအတွက်အဖြစ်ပေမယ့်အပြည့်အဝဦးနှောက်လွှမ်းခြုံနှင့်အတူတူညီခဲ့ကြသည်။
Preprocessing နှင့် data analysis သည် Matlab တွင်အကောင်အထည်ဖော်နေသောစာရင်းအင်း Parametric Mapping software (SPM2; Neuroimaging for Wellcome Trust Center, Neurology Institute, London, UK) ကို အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ EPI ရုပ်ပုံများကိုအချပ်အချိန်ကုန်ခြင်းနှင့်ရွေ့လျားခြင်းအတွက်တည့်မတ်ပေးပြီးနောက်ဘာသာရပ်၏ခန္ဓာဗေဒ IREPI ကို SPM template သို့ဖြိုဖျက်ခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်သောပုံရိပ်များကိုဤအရာများအသုံးချခြင်းအားဖြင့် Montreal Neurological Institute template သို့ Spatial ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အနေအထားအထိပုံမှန်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီး 2x2 ×2mm အရွယ် voxels အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၄ မီလီမီတာ Gaussian kernel ကို အသုံးပြု၍ ချောမွတ်သွားသည်။
စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့, ဒေတာသူတို့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယုတ်နှင့် filtered High-pass ပေါ်သို့ voxel-by-voxel ခဲ့သည်ဆို၏ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက် trial-ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုရုံးတင်စစ်ဆေးတဲ့ vector convolving အားဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်တစ်ဦး canonical hemodynamic တုံ့ပြန်မှု function ကိုနှင့်၎င်း၏ယာယီအနကျအဓိပ်ပါယျ (နဲ့အတူ onsetsFriston et al ။ , 1998) ။ မျှော်လင့်ထားသည့်အသစ်အဆန်း cue, ကျွမ်း cue, မျှော်မှန်းထားသည် / မမျှော်လင့်ဘဲဝတ္ထုရလဒ်ကို /: တစ်ဦးကယေဘုယျ linear မော်ဒယ် (GLM) (covariates ခဲ့ကြသည်, ရုံးတင်စစ်ဆေးနှုန်းနှစ်ခုစတင်ခြင်းသုံးပြီးအကျိုးစီးပွားသက်ရောက်မှုပုံစံချင်းစီပါဝင်သူများအတွက် cue စတင်ခြင်းဘို့တနှင့်ရလဒ်ကိုစတင်ခြင်းဘို့တသတ်မှတ်ထားသောခဲ့သည် မျှော်လင့်မထားတဲ့အကျွမ်းတဝင်ရလဒ်ကို) နှင့်ကျန်နေတဲ့ရွေ့လျားမှု-related အပိုငျးအဖမ်းယူခြင်းမရှိအကျိုးစီးပွားခြောက်လ covariates ။ အောက်ပါထူးခွားသညျ့ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်: မျှော်လင့်ထားသည့်ဝတ္ထုရလဒ်များနှင့်မမျှော်လင့်ဘဲ vs. မျှော်လင့်ထားသည့်အကျွမ်းတဝင်ရလဒ်များ vs. မျှော်လင့်မထားတဲ့မျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်များ, vs. မျှော်လင့်မထားတဲ့ဝတ္ထု vs. အကျွမ်းတဝင်တွေကို, အကျွမ်းတဝင်ရလဒ်များ vs. ဝတ္ထု။ သို့သော်လည်း parameter ခန့်မှန်းဖို့ linear ထူးခွားသညျ့လျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူများအတွက်စာရင်းအင်း parametric မြေပုံတီးပွီး, တစ်စက္ကန့်-Level ကျပန်းသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်အုပ်စုတစ်စုသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ဖို့ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ အကျိုးကိုနှင့် hippocampal စနစ်များကို Activation ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ဦးအယူအဆပေးထားသည့်ဆိုးကျိုးများတနမူနာအတွက်အရေးပါမှုအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြ tတစ်ခုံမှာ -tests p <0.005, အမှားပြင်နှင့်အနည်းဆုံးစပျစ်သီးပြွတ်အရွယ်အစား k =5voxels, မဟုတ်ရင်ဖော်ပြထားမဟုတ်လျှင်။ ထို့နောက်အလင်းဆုံသေးသောအသံအတိုးအကျယ်ပြင်ဆင်မှုကိုအထွတ်အထိပ် voxels များပေါ်တွင်ဗဟိုပြုပြီးတည်ဆောက်ပုံအရွယ်အစားနှင့်လိုက်ဖက်သောအချင်းများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Lupien et al ။ , 2007) နှင့် sustia nigra အတွက် activation များအတွက် 4.5 မီလီမီတာ (ကြည့်ပါ Geng et al ။ , 2006)] ။ sustia nigra နှင့် hippocampus ရှိအထွတ်အထိပ် voxels ၏ Beta တန်ဖိုးများကိုစမ်းသပ်ခြင်းတွင်ယေဘူယျအဆင့်အတွက်အချက်ပြပြောင်းလဲမှုရာခိုင်နှုန်းရရှိရန် HRF ၏တန်ဖိုးနှင့်အတူထုတ်ယူ။ တည့်မတ်ခဲ့သည် အားလုံးအမူအကျင့်ပျမ်းမျှအားယုတ်တန်ဖိုးများ (mean SEM) ၏စံအမှား (SEM) အဖြစ်ပေးထားသည်။
midbrain လှုပ်ရှားမှုသတ်မှတ်ပြီးဆက်လက်စေရန်, activation မြေပုံ (ယခင်ကဝယ်ယူ 33 Spatial ပုံမှန်သံလိုက်လွှဲပြောင်း (MT) ပုံရိပ်တွေတစ်ခုယုတ်ပုံရိပ်အပေါ် superimposed ခဲ့ကြသည်Bunzeck နှင့် Duzel, 2006) ။ MT ပုံရိပ်တွေတွင် substantia nigra လွယ်ကူစွာ (ပတျဝနျးကငျြအဆောက်အဦများအနေဖြင့်ခွဲခြားနိုင်ပါသည်Eckert et al ။ , 2004) ။ Active များ၏ဒေသခံကူညီပေးဖို့, တစ်ဦးချင်းစီဆနျ့ကငျြဘ၏အထွတ်အထိပ် voxels (Talairach အာကာသသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်Talairach နှင့် Tournoux, 1988) က Matlab function ကို mni2tal.m သုံးပြီး (မဿဲ Brett, 1999) နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲ Talairach daemons လိုင်းသုံးပြီးခန္ဓာဗေဒဒေသများသို့လိုက်ဖက် (Lancaster et al ။ , 2000; ဗားရှင်း 1.1, သုတေသန Imaging စင်တာ, San Antonio တွင်မှာတက္ကဆက်ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံစင်တာတက္ကသိုလ်) ။ အားလုံး stereotaxic သြဒီနိတ်ထို့ကြောင့် Talairach အာကာသအတွင်းပေးထားကြသည်။
အဆိုပါ fMRI စမ်းသပ်မှုများအတွက်အကောင်အထည်ဖော်အဖြစ် fMRI တွေ့ရှိချက်များကလှုံ့ဆော်နေတဲ့သီးခြားအပြုအမူနောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုမှာတော့ 12 ပါဝင်သူ (2 အထီး) အတူတူရင်းနှီးကျွမ်းနှင့်အသစ်အဆန်းမျှော်လင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပြီးစီး။ အဆိုပါ fMRI အတွက်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ကြာချိန်နှင့်အရေအတွက်က signal ကိုအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေရန် optimized ပေမယ့်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်အခွင့်အလမ်းအထက်တွင်ဆက်လက်တည်ရှိခွင့်ပြုပါရန်လည်းကျယ်ပြန့်ခဲ့ကြသောကြောင့်, အမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုဟာ fMRI စမ်းသပ်မှုကနေကွဲကွာခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်အမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုအတွက်အလွတ်ကျက်လွယ်ကူချောမွေ့ရန်, မျှော်မှန်းထားသည်ဝတ္ထုဓာတ်ပုံများကို်စမ်းသပ်မှုတွေ၏နံပါတ် 120, 40 မှမျှော်လင့်မထားတဲ့ဝတ္ထုပုံအရေအတွက်ကိုလျှော့ချခဲ့သည်။ လေ့လာမှု session တစ်ခုပြီးနောက်တစ်နေ့မှာသင်တန်းသားများကို (ထိုသင်တန်းသားများကိုမရောက်မီမတွေ့မမြင်ဖူးကြောင်းသစ်ကို distractor ဓါတ်ပုံတွေကိုလေ့လာမှုအဆင့် (ယခု '' အဟောင်း '' ဓာတ်ပုံများကို) မှအားလုံး 160 ဝတ္ထုဓာတ်ပုံများကိုင်တစ်ဦးမှတျဉာဏျစမျးသပြီးစီးခဲ့နှင့် 80သဖန်းသီး။ 1ခ) လေ့လာမှု၏ဤအပိုင်းတွင်ပါ ၀ င်သူများသည်ပုံတစ်ပုံစီအတွက်နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်။ နှစ်ခုစလုံးကိုပုံ၏အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာသားဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ ပထမဆုံးဖြတ်ချက်မှာ“ ဟောင်း / အသစ်” ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ဖြစ်သည်၊ ဒုတိယဆုံးဖြတ်ချက်မှာ“ မှတ်မိ / သိ / မှန်း” (“ ဟောင်း” တုံ့ပြန်မှုပြီးနောက်) သို့မဟုတ်“ သေချာ / မှန်း” (“ အသစ်” တုံ့ပြန်မှု) တရားစီရင်ခြင်း။ အချိန်ကာလသည် ၃ ဆနှင့် ၂.၅ စက္ကန့်စီအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်အချိန်ကာလတစ်ခုအနေဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုအရှိန်မြှင့ ်၍ လာသည်၊ နောက်ပုံကိုမတင်ပြမီ ၁ စက္ကန့် fixation အဆင့်ကိုလိုက်သည်။
လေ့လာမှုအဆင့်အနေဖြင့်ပါဝင်သူများ၏တုံ့ပြန်မှုအချိန်များနှင့်ပတ်သက်သည့်ရုပ်ပုံအမျိုးအစား (ဝတ္ထု / အကျွမ်းတဝင်)၊ မျှော်လင့်ထားသည့် (မျှော်လင့်မထားသော / မျှော်လင့်မထားသော) နှင့်အုပ်စု (စကင်ဖတ်စစ်ဆေးထားသောအုပ်စု / မှတ်ဥာဏ်အုပ်စု) နှင့်စမ်းသပ်မှုများအပေါ်2×2×2ANOVA ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာခြင်းအဆင့်အတွက် ရုပ်ပုံအမျိုးအစားနှင့်မျှော်လင့်ချက်နှင့်အုပ်စုနှင့်ရုပ်ပုံအမျိုးအစားအကျိုးသက်ရောက်မှုအကြားအပြန်အလှန် (ကိုကြည့်ပါ စားပွဲတင် 1 တုံ့ပြန်မှုကြိမ်; အမျိုးအစားအကျိုးသက်ရောက်မှု: F[1,25] = 31.57, p <0.001; မျှော်လင့်ချက်အကျိုးသက်ရောက်မှု F[1,25] = 8.47, p <0.01; အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု F[1,25] = 5.49, p <0.05) ။ post hoc တွဲ t-tests မျှော်လင့်ထားသည့်အကျွမ်းတဝင်ပုံနဲ့မျှော်လင့်ထားသည့်ဝတ္ထုဓါတ်ပုံတွေကိုနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအတုံ့ပြန်မှုကြိမ်သက်ဆိုင်ရာမျှော်လင့်မထားတဲ့ဓါတ်ပုံတွေကို (အဘို့ထက်သိသိသာသာပိုတိုဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုp <0.01 နှင့် p <0.05, အသီးသီး) ။ မျှော်လင့်ထားသည့်နှင့်မျှော်လင့်မထားသောအကျွမ်းတဝင်ရှိသောဓါတ်ပုံများအတွက်တုံ့ပြန်မှုအချိန်များသည်သက်ဆိုင်ရာဝတ္ထုဓါတ်ပုံများထက်သိသိသာသာတိုတောင်းခဲ့သည် (p <0.001 နှင့် p = 0.001, အသီးသီး) ။ အဆိုပါအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်, တစ် ဦး တည်းသာပါဝင်သူအုပ်စုတစ်စုအတွက်သိသာထင်ရှားသောအမျိုးအစားအကျိုးသက်ရောက်မှုကနေရလဒ်မခဲ့ပေ tဝတ္ထုနှင့်အကျွမ်းတဝင်ဓာတ်ပုံများကိုမှတုံ့ပြန်မှုအဆနှိုင်းယှဉ် -tests (နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအတွက်သိသာထင်ရှားသောခဲ့ကြသည်p <0.05 scan ဖတ်အုပ်စုအဘို့နှင့် p <မှတ်ဉာဏ်အုပ်စုအဘို့အ 0.001) ။ ဤရလဒ်သည်ပါ ၀ င်သူများကအချက်အလက်များကိုဂရုပြုပြီး ၀ တ္ထုများနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိသောရုပ်ပုံများကိုခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းအတွက်အမူအကျင့်ကောင်းများရရှိရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ မှန်ကန်သောတုန့်ပြန်မှုနှုန်းသည်အမျိုးအစားများနှင့်အုပ်စုများအကြားကွဲပြားမှုမရှိပါ (မျှော်လင့်ထားသည့်ဝတ္ထုဓါတ်ပုံများအတွက်ပျမ်းမျှ - ၉၅.၁% - ၃.၇%၊ မျှော်လင့်မထားသောဝတ္ထုများအတွက် - ၉၄.၁ - ၃.၆%၊ မျှော်လင့်ထားသည့်အကျွမ်းတ ၀ င်ဓာတ်ပုံများ - ၉၃.၈% - ၃.၉% နှင့်မမျှော်လင့်သောအကျွမ်းတဝင်ရှိသောဓာတ်ပုံများအတွက်) : 95.1% ± 3.7%) ။
ပုံရိပ်နှစ်မျိုး (အကျွမ်းတဝင် / ဝတ္ထု) မှမှန်ကန်သောအမျိုးအစားခွဲခြားထားသောပုံရိပ်များနှင့်စမ်းသပ်မှုအုပ်စုနှစ်ခုအတွက်ရှေ့ပြေးအချက် (မျှော်မှန်းထားသည် / မျှော်လင့်မထားသော) နှင့်ပတ်သက်သောတုံ့ပြန်မှုအချိန်များ (ms ± SEM) ။
ကျနော်တို့ထို့နောက်အမူအကျင့်နောက်ဆက်တွဲအတွက်လေ့လာမှုအဆင့်အပြီး 1 နေ့ကထွက်သယ်ဆောင်သောမှတ်ဥာဏ်စမ်းသပ်မှုကနေရလဒ်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ တစ်ဦးက Two-လမ်းအချက်များမှတ်ဉာဏ်နှင့်အတူ ANOVA (တညျ့နှုန်းထားများသိကျွမ်း / မှတ်မိ) နှင့်အသစ်အဆန်းမျှော်လင့် (မျှော်လင့်ထား / မမျှော်လင့်ဘဲ) တစ်ဦးအပြန်အလှန်သက်ရောက်ပုံများအားပြသခဲ့သည် (F[1,11] = 5.66, p <0.05) ။ post hoc တွဲ t-test သည်မျှော်မှန်းထားသော (၈.၉ ± ၅%) မျှော်လင့်ထားသည့် ၀ တ္ထုပုံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မှန်ကန်သောသတိရ / သိမှတ်နှုန်းနှင့်သိသိသာသာမြင့်မားသောကွာခြားချက်ကိုဖော်ပြသည် (8.9 ± 5%) (p <0.05; တုံ့ပြန်မှုနှုန်းကိုကြည့်ပါ စားပွဲတင် 2) ။ နောက်ထပ် post ကို hoc တွဲ t- စမ်းသပ်မှုများကမှန်ကန်သောမှတ်မိနှုန်းနှင့်မှန်ကန်သောဗဟုသုတအဆင့်နှင့်မမျှော်လင့်ထားသည့်တစ် ဦး တည်းမျှော်လင့်ထားသည့်တစ်ခုတည်းကသိသိသာသာကွဲပြားမှုမရှိကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။ ခန့်မှန်းတုံ့ပြန်မှုအချိုးအစားသည်အမျိုးအစားများနှင့်မတူပါ (မျှော်လင့်ထားသည့်ပုံများအတွက် ၁၁.၁ - ၂.၃% နှင့်မမျှော်လင့်သောပုံများတွင် ၁၂.၃ - ၂.၄%) ။
ကျနော်တို့ကိုလည်းကျယ်ပြန့်လက်ခံထားသောမော်ဒယ် (၏အခြေခံတခုတခုအပေါ်မှာလွတ်လပ်ရေးယူဆချက်အောက်မှာစာမျက်နှာနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း၏ပံ့ပိုးမှုများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာYonelinas et al ။ , 1996ကျွမ်းတစ်ခုနဂိုအတိုင်း hippocampus ၏မရှိခြင်းအတွက်ထောက်ခံနိုင်မယ့် signal ကို-ထောက်လှမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကိုယ်စားပြုသော်လည်း), အရာစာမျက်နှာအညီ hippocampus-မှီခိုတံခါးခုံဖြစ်စဉ်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ စာမျက်နှာဟာသတိရမှုနှုန်းကနေသတိရမှားယွင်းသောနှိုးစက် (လွတ်လပ်သောအာရှအသံ) ၏နှုန်းမှာနုတ်အားဖြင့်ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ ကျွမ်းပထမဦးဆုံး (FR အောက်ပါညီမျှခြင်းကိုကြည့်ပါ) မရင်းနှီးတုံ့ပြန်မှုတွက်ချက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဃ-ချုပ်တန်ဖိုးကိုရယူနေဖြင့်ခန့်မှန်းခဲ့သည်။
ရာခိုင်နှုန်းတုံ့ပြန်မှုအချိုးအစားနေသောစာမျက်နှာ (RE) ၏ခန့်မှန်းချက်, နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါလိမ့်နိုင်ရန်အတွက်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းခန့်မှန်းချက် (FE), နေသော d'တန်ဖိုးများ, နှစ် ဦး စလုံးအစီအမံအသွင်ပြောင်းခဲ့သည် zစာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမတိုင်မီ -scores ။ အဆိုပါအချက်များမှတ်ဉာဏ်နှင့်အတူ ANOVA (စာမျက်နှာခန့်မှန်းချက် / ကျွမ်းခန့်မှန်းချက်) နှင့်အသစ်အဆန်းမျှော်လင့် (မျှော်လင့်ထား / မမျှော်လင့်ဘဲ) ကိုအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု (တုန့်ပြန်မှုနှုန်းအပေါ် ANOVA အတွက်ရရှိသောအတည်ပြုခဲ့သည်တစ်ဦးက Two-လမ်းF[1,11] = 5.78, p <0.05) ။
ညာဘက် midbrain အများစုဖွယ်ရှိ SN; ဝတ္ထုပုံမျှော်လင့်ရန်ဦးဆောင်တွေကို, အကျွမ်းတဝင်ဓာတ်ပုံများကို၏မျှော်လင့်မတူဘဲထဲမှာ, dopaminergic စနစ် (left striatum ဖွဲ့စည်းကြောင်းဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်သိသာစွာမြင့်မားတဲ့လှုပ်ရှားမှုမှဦးဆောင်; သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 2A, B, စားပွဲတင် 3ယခင်ကဆုလာဘ်မျှော်လင့်နဲ့ဆက်စပ်), ဒေသများ (Knutson et al, 2001a, ခ။ O'Doherty et al ။ , 2002; ပြန်လည်သုံးသပ်မြင်ဘို့ Knutson နှင့် Cooper က, 2005) ။ ရလဒ်ကိုဆနျ့ကငျြဘအဘို့, မမျှော်လင့်ဘဲ vs. မျှော်လင့်ထားသည့်ဝတ္ထုရလဒ်များလည်း (လက်ျာဘက် SN / VTA activatedသင်္ဘောသဖန်းသီး။ 4A, B, စားပွဲတင် 4) ။ ဤသည်ကို Activation ပုံစံ (dopaminergic အာရုံခံဆုလာဘ်အတွက်ခန့်မှန်းအမှားသတင်းပို့ဘယ်မှာဆုလာဘ် Paradigm နှင့်အတူ dopaminergic midbrain တွင်တွေ့မြင်တစ်ခု activation ပုံစံဆင်တူSchultz et al ။ , 1997) ။ ဆနျ့ကငျြ, ကျွမ်းတွေကိုတုန့်ပြန်နှင့်မမျှော်လင့်ဘဲ vs. အတွက်လှုပ်ရှားမှုအကျွမ်းတဝင်ဓာတ်ပုံများကိုဒီပုံစံမပြခဲ့ဘူးမျှော်မှန်းထားသည်။ ထို့ကြောင့်ဤရလဒ်များ SN / VTA အတွက်အသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်များအပြောင်းအလဲနဲ့အကြားမျဉ်းပြိုင်သရုပ်ပြပါ။
'' ပစ္စည်းအသစ်အဆန်းမျှော်လင့် '' တုံ့ပြန်မှု: အကျွမ်းတဝင်ဓာတ်ပုံများကိုခန့်မှန်းတွေကို vs. ဝတ္ထုဓါတ်ပုံတွေကိုခန့်မှန်းတွေကိုအဘို့အ Hemodynamic လှုပ်ရှားမှု။ (က) ညာဘက် SN / VTA အတွက် activation ၏ Cluster ။ အဆိုပါ hemodynamic တုံ့ပြန်မှု (ခ) ခန့်မှန်းရာခိုင်နှုန်းက signal ကိုအပြောင်းအလဲ ...
'' မမျှော်လင့်ဘဲအသစ်အဆန်း '' တုံ့ပြန်မှု: ခန့်မှန်းရခက်ဝတ္ထုဓာတ်ပုံများကိုများအတွက် Hemodynamic လှုပ်ရှားမှု, အကျွမ်းတဝင်ဓာတ်ပုံများကိုခန့်မှန်းတွေကိုပြီးနောက်ပြဆိုလိုသည်မှာဝတ္ထုပုံများ, vs. ဝတ္ထုပုံများ, ရှေ့ cue အားဖြင့်ခန့်မှန်းဆိုလိုသည်မှာဝတ္ထုဓါတ်ပုံတွေကိုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ (က) ...
အသစ်အဆန်းမျှော်လင့်တုံ့ပြန်မှု: အကျွမ်းတဝင်ဓာတ်ပုံများကို၏မျှော်လင့် vs. ဝတ္ထုပုံမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်းတက်ကြွဒေသခန္ဓာဗေဒနေရာများ
'' မမျှော်လင့်ဘဲအသစ်အဆန်း '' တုံ့ပြန်မှု: မျှော်လင့်ထားသည့်ဝတ္ထုရုပ်ပုံများအားဖြင့်ထက်မျှော်လင့်မထားတဲ့ဝတ္ထုရုပ်ပုံများအားဖြင့်အကျိုးရလဒ်မှာပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန် activated ဒေသခန္ဓာဗေဒနေရာများ
အဆိုပါ hippocampus မှာတော့အသစ်အဆန်းမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ဝတ္ထုရလဒ်များနှစ်ဦးစလုံး (အကျွမ်းတဝင်လှုံ့ဆော်မှုများ၏မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ရလဒ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါတိုးမြှင်နှစ်နိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 2C, D နှင့် 3; စားပွဲတင် 3) ။ လက်ျာ hippocampus (မျှော်လင့်ထားသည့်ဝတ္ထုရုပ်ပုံများသည်ထက်မျှော်လင့်မထားတဲ့ဝတ္ထုဓါတ်ပုံတွေအတွက်လည်းပိုပြီးတက်ကြွခဲ့သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 4ကို C, D ကို; စားပွဲတင် 4) ။ ထို့အပြင်လက်ဝဲ hippocampus (Talairach ကိုသြဒီနိတ်များ - - ၃၆၊ ၁၄၊ ၁၄) သည်မျှော်လင့်မထားသည့်ရုပ်ပုံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မျှော်လင့်ထားသည့်ရုပ်ပုံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆက်စပ်မှုအသစ်အဆန်း၏ hippocampal processing နှင့်ကိုက်ညီသည်။Ranganath နှင့် Rainer, 2003; Bunzeck နှင့် Duzel, 2006).
'' ဝတ္ထုရလဒ်ကို '' တုံ့ပြန်မှု: အားလုံးဝတ္ထုဓာတ်ပုံများကိုများအတွက် Hemodynamic လှုပ်ရှားမှု vs. အားလုံးအကျွမ်းတဝင်ပုံများ, ရှေ့ cue ၏လွတ်လပ်သော။ (က) လက်ဝဲ hippocampus အတွက် activation ၏ Cluster ။ အဆိုပါ hemodynamic တုံ့ပြန်မှု (ခ) ခန့်မှန်းရာခိုင်နှုန်းက signal ကိုအပြောင်းအလဲ ...
ပါဝင်သူများအပေါ် 'အသစ်အဆန်း vs. အကျွမ်းတဝင်မျှော်လင့်ခြင်း' ဆန့်ကျင်ဘက်၏အထွတ်အထိပ်အသံများကိုတုံ့ပြန်သည့်ပျှမ်းမျှရာခိုင်နှုန်းအချက်ပြပြောင်းလဲမှုကိုအသုံးပြုပြီးစမ်းသပ်မှုအရ cue အဆင့်တွင်ညာဘက် SN / VTA activation နှင့် hippocampal လှုပ်ရှားမှုတို့အကြားသိသိသာသာကောင်းမွန်သောဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည် ( Pearson ရဲ့ r = ၆၈.၃၃၊ p <0.05 တ ဦး တည်းအမြီး; သဖန်းသီး။ 5) ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များကို SN / VTA နှင့်အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက် hippocampus အကြားတစ်ဦး functional အပြန်အလှန်အဖြစ်အလုပ်လုပ်တဲ့ dissociations ဖော်ပြသည်။
SN / VTA activation နှင့် '' အသစ်အဆန်းကျွမ်းမျှော်လင့် vs. '' ဆနျ့ကငျြဘ၏အထွတ်အထိပ် voxels အတွက်အသစ်အဆန်းတွေကိုတုန့်ပြန်၏ပျမ်းမျှရာခိုင်နှုန်းက signal ကိုပြောင်းလဲမှုအပေါ်စမ်းသပ်ပြီးအဖြစ်ညာဘက် hippocampal လှုပ်ရှားမှုအကြားဆက်စပ်မှု။
အမူအကျင့်အားဖြင့်၊ cue တရားဝင်မှုသည်ဝတ္ထုနှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သောလှုံ့ဆော်မှုများကိုခွဲခြားဆက်ဆံစဉ်ဘာသာရပ်များ၏တုံ့ပြန်မှုကာလအပေါ်သိသာသောအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ fMRI ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရ ၀ တ္ထုဆိုင်ရာပုံရိပ်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အချက်များသည်အကျွမ်းတဝင်လှုံ့ဆော်မှုများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အချက်များထက် SN / VTA ကိုပိုမိုလျင်မြန်စွာပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 2A, B, စားပွဲတင် 3) ။ အသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်၌ဤ SN / VTA activation ပုံစံ (ကတုန့်ပြန်ဆုလာဘ်၏အစောဆုံးခန့်မှန်းဖို့မြင်ကြသည်အဘယ်မှာရှိဆုလာဘ် Paradigm မှာတွေ့ရှိတဲ့ပုံစံဆင်တူKnutson et al, 2001a ။ Wittmann et al ။ , 2005) ။ အဆိုပါ SN / VTA, မျှော်မှန်းထားသည်ဆုလာဘ် (နှိုင်းယှဉ်ပါကမမျှော်လင့်ဘဲအဘို့အအမည်ရ, တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏နောက်ထပ်အိမ်ခြံမြေSchultz, 1998), လည်းအသစ်အဆန်းမှ SN / VTA တုံ့ပြန်မှုများက paralleled ခဲ့သည်။ SN / VTA activation (ဝတ္ထုပစ္စည်းများမျှော်မှန်းတင်ဆက်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါမျှော်လင့်မထားတဲ့တင်ဆက်မှုမှတုန့်ပြန်အားကောင်းခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 4A, B, စားပွဲတင် 4) ။ ကဟောကိန်းထုတ်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်ကျွမ်းတွေကိုအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမ SN / VTA တက်ကြွစွာ Jitter protocol ၏ထိရောက်မှုကိုသရုပ်ပြရှိ၏အဖြစ် anticipatory SN / VTA activation နောက်ဆက်တွဲဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ hemodynamic signal ကို၏ညစ်ညမ်းမှုရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းမဖြစ်နိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်အသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်အကြားတူညီ SN / VTA-hippocampal ဆားကစ်ပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ဘုံသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကျော်လွန်တတ်ကြောင်းညွှန်ပြခြင်းနှင့်အသစ်အဆန်းသူ့ဟာသူအကျိုးကိုကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့လုပ်ငန်းများ၌ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေမြှင့်။ ဤ (ဝတ္ထုအရာဝတ္ထုများ၏ရှာဖွေတူးဖော်နေစဉ်အတွင်းစိတ်ကြွဆေး၏လျော့ချ Self-အုပ်ချုပ်ရေးဖေါ်ပြခြင်းဒေတာအပါအဝင်တိရိစ္ဆာန်သုတေသနကနေလေ့လာတွေ့ရှိချက်အတော်များများနှင့်သဟဇာတဖြစ်Klebaur et al ။ , 2001ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှု်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဘို့), အရပျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစားပေး (Bevins နှင့် Bardo, 1999) နှင့်အသစ်အဆန်းမှအေးစက် (ရိဒ် et al ။ , 1996) ။ သို့သော်အသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်များအကြားကဒီဆက်ဆံရေးဟာအကျွမ်းတဝင်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်ရသောအစဉ်အလာအားဖြည့် protocols များ, ကနေဆင်းသက်လာအခြမထိခိုက်ပါဘူး။ ဤသည်အများအပြားအခြေအနေများတွင်ကအလွန်အမင်းအကျွမ်းတဝင်ပစ္စည်းများမှဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းထားတဲ့အေးဂျင့်ဘို့ရှင်းလင်းစွာအကျိုးရှိကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုပြော၏။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှု၏အခ်ါဆုလာဘ်ဂုဏ်သတ္တိများပုံမှန်အားဖြင့်ဝတ္ထုအခင်းအကျင်းများနှင့်ပစ္စည်းများ (မှလေ့လာတွေ့ရှိရှာဖွေတူးဖော်ခွင့်အပြုအမူတွေကိုအခြေခံစေခြင်းငှါစိတ်ကူးထောက်ပံ့ပေးပါဘူးEnnaceur နှင့် Delacour, 1988; Stansfield နှင့် Kirstein, 2006) ။ ဆုလာဘ်ရလဒ်ကို၏ SN / VTA အာရုံခံနိုင်တဲ့ coding ၏နောက်ထပ်ပိုင်ဆိုင်မှုသပ္ပါယ်နိုင်တဲ့ coding (ဖြစ်ပါတယ်Tobler et al ။ , 2005), အရာတစ်ခုချင်းစီကိုအခြေအနေတွင်ရရှိနိုင်သောအခြားရွေးချယ်စရာဆုလာဘ်ပေါ် မူတည်. တူညီသောမျှော်မှန်းဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုတုံ့ပြန်တဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့အဆင့်အထိဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ High-တန်ဖိုးကိုဆုလာဘ်နှင့်အတူအခြေအနေတွင်ထက်နိမ့်တန်ဖိုးကိုဆုလာဘ်နှင့်အတူအခြေအနေတွင်တင်ပြလျှင်အလတ်စား-တန်ဖိုးကိုဆုလာဘ်မြင့်မား dopaminergic တုံ့ပြန်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။ SN / VTA ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ဤပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုသေးသညျလူသားတို့အတွက်အသစ်အဆန်းများအတွက်ပုံတူကူးယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ အမှန်စင်စစ်ဆုလာဘ်မတူဘဲအသစ်အဆန်းလူ့ SN / VTA (များတွင် adapter coded မရစေခြင်းငှါ, အထောက်အထားလည်းမရှိBunzeck နှင့် Duzel, 2006), နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုထမ်းသောအသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်များအကြားအလုပ်လုပ်တဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုအကြံပြုခြင်း။
အဆိုပါ hippocampus အတွက်အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့ကာလအတွင်းလှုပ်ရှားမှုများ၏လှုံ့ဆော်မှု-related ပုံစံဟာ SN / VTA တွင်တွေ့မြင်ပုံစံကနေကွဲပြားပါတယ်။ SN / VTA မတူဘဲ, အ hippocampus (မျှော်လင့်ထားသည့်ဝတ္ထုအဘို့အမြင့်မားလှုပ်ရှားမှုသူတို့ကိုယ်သူတို့လှုံ့ဆော်မှုပြသသဖန်းသီး။ 3) ။ ထို့အပြင် hippocampus လည်းပိုပြီး (Contextual အသစ်အဆန်းများက activated ခဲ့သည်Lisman နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2005) လွတ်လပ်စွာစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအသစ်အဆန်းများ, သိသာအကျွမ်းတဝင်ဓာတ်ပုံများကိုများ၏ခန့်မှန်းရခက်တင်ဆက်မှုရန်၎င်း၏တုံ့ပြန်မှုပါ။ ဤသည် (ယခင်ဒေတာအတည်ပြုBunzeck နှင့် Duzel, 2006), သင်ယူပာအတွင်းမတိုက်ဆိုင်ရန်ဤဖွဲ့စည်းပုံ၏ sensitivity ကိုညွှန်ပြတွေ့ရှိချက်အပါအဝင် (Kumaran နှင့် Maguire, 2006) ။ နှုန်း se ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် hippocampus ၏ activation သိမ်းဆည်းထားအသင်းအဖွဲ့များ (နဲ့အတူစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုသတင်းအချက်အလက်တစ်ခု intrahippocampal နှိုင်းယှဉ်ထံမှ SN / VTA ရလဒ်မှအသစ်အဆန်းအချက်ပြမှုများ hippocampal ထားတဲ့အတိုင်း, ဒါခေါ် VTA-hippocampal ကွင်းဆက်မော်ဒယ်နှင့်အတူကောင်းစွာသဟဇာတဖြစ်Lisman နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2005) ။ အသစ်အဆန်း-ခန့်မှန်းတွေကိုတုန့်ပြန် Hippocampal activation (သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 2ကို C, D ကို; စားပွဲတင် 3), အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒီမော်ဒယ်အားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့မရနိုင်ပါ။ ကျနော်တို့ (က dopaminergic ခန့်မှန်း signal ကို CA1 မှ dopaminergic input ကိုကနေတဆင့် hippocampal activation induces ကြောင်းအကြံပြုဂျေး, 2003), ဒီလေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့ SN / VTA နှင့် hippocampus အတွက် cue-ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုအကြားသိသိသာသာဆက်စပ်နှင့်သဟဇာတတစ်ဦးအနက်။
ယခင်ရလဒ်များသည်ဆုလာဘ် Paradigm အတွက် mesolimbic စနစ်ကပြပွဲ differential ကို anticipatory တုံ့ပြန်မှုအပြင်ဘက်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများဖော်ပြသည်။ မကြာသေးမီကဥပမာ (မူလတန်းအမြင်အာရုံ cortex V1 ထိုသို့သောတုံ့ပြန်မှုများ၏ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပါတယ်Shuler နှင့်ထမ်းရွက်, 2006) ။ ဤရွေ့ကားတုံ့ပြန်မှု dopaminergic မော်ဂျူမောင်းနှင်ခံရဖို့တွေးဆနေကြပါတယ်။ အလားတူယန္တရားအသစ်အဆန်း၏အပြောင်းအလဲနဲ့လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ မသက်ဆိုင်ဘဲမူလအဆိုပါ hippocampus သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်, အ hippocampus ၏ coactivation နှင့် SN / VTA မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း hippocampus တိုးမြှင် dopaminergic input ကိုနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ကြောင်းယင်း dopaminergic midbrain drives တွေကိုရှိမရှိ၏။ ဒီအလှည့်အတွက်, (computationally ဖြစ်နိုင်ကြောင်းစံပြလာမည့်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်သင်ယူပိုကောင်းစေပါတယ်တဲ့ပြည်နယ်သွေးဆောင်နိုင်Blumenfeld et al ။ , 2006).
အသစ်အဆန်းမျှော်လင့်၏ SN / VTA-hippocampal အပြောင်းအလဲနဲ့အပြင်, အသစ်အဆန်းတွေကိုတုန့်ပြန်လုပ်ဆောင်မှုဖေါ်ပြခြင်းကအခြားဦးနှောက်ဒေသများတွင်လည်းရှိကြ၏, တိုကျရိုကျ cortex အများစုအထူးသဒေသများသည်ယခင်က (အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်Daffner et al ။ , 2000; စားပွဲတင် 3), နှင့် parahippocampal cortex ၏ဒေသများ (Duzel et al, 2003 ။ Ranganath နှင့် Rainer, 2003) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယူဆချက် SN / VTA နှင့် hippocampal အပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြသကဲ့သို့ပင်ဤရလဒ်များပိုမိုနီးကပ်စွာစုံစမ်းစစ်ဆေးဤလေ့လာမှု၏နယ်ပယ်အပြင်ဘက်တည်ရှိသည်။ အနာဂတ် frontoparietal အသစ်အဆန်းကွန်ယက်၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် SN / VTA နှင့် hippocampus နှင့်အတူ၎င်း၏ interaction ကအသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့၏ကြီးထွားလာဥာဏ်သိသိသာသာ add လိမ့်မယ်။
မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း hippocampus ၏ preactivation သင်ယူနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်သောစိတ်ကူးနှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်း၌, ဝတ္ထုဓါတ်ပုံတွေကိုမျှော်လင့်ထားသောငါတို့အမူအကျင့် data တွေကိုပြသနေတဲ့မြင့်မားတဲ့မှတ်ဉာဏ် 1 တစ်ရက်အကြာတွင်စမ်းသပ်ပြီးသောအခါမမျှော်လင့်ဘဲဝတ္ထုဓါတ်ပုံတွေထက်တုံ့ပြန်မှုခြားနားချက်ကိုသိ / သတိရပေါက်ဖွားပေးသော။ တစ်ဦးကသတိရတုံ့ပြန်မှုလေ့လာမှုဇာတ်လမ်းတွဲထဲကနေစကားစပ်၏စာမျက်နှာလိုအပ်ပြီးထို့ကွောငျ့အသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်၏ကျွမ်း-based, Non-Episode ရှုထောင့် (မတူဘဲအတွက် Episode မှတ်ဉာဏ်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်Tulving, 1985; Duzel et al, 2001 ။ Yonelinas et al ။ , 2002) ။ အဆိုပါ hippocampus ယခင်လေ့လာမှုများ (ဥပမာအောင်မြင် Episode မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် ဘရူ et al, 1998 ။ Wittmann et al, 2005 ။ Daselaar et al ။ , 2006), နှင့် hippocampus ၏တွေ့ရှိရပါသည်အဓိကအားအသိအမှတ်ပြုမှု၏မှတ်မိအစိတ်အပိုင်းအယှက်မှတွေ့ပါပြီ (Duzel et al, 2001 ။ Aggleton နှင့်ဘရောင်း, 2006) ။ ကျနော်တို့မကြာသေးမီကဆုလာဘ်-ခန့်မှန်းလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်မှတ်ဉာဏ်ကိုလည်းဆုလာဘ်များမရှိခြင်း (ခန့်မှန်းကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုနှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုမြင့်မားကိုသိ / သတိရအချိုးနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်ကြောင်းအစီရင်ခံWittmann et al ။ , 2005), နှင့်ဤမှတ်ဉာဏ်တိုးတက်မှုဆုချ-ခန့်မှန်းရန်လှုံ့ဆော်မှု encoding က၏ထိုအချိန်ကတုံ့ပြန်မှုအတွက်တိုးလာ SN / VTA နှင့် hippocampal activation နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိရလဒ်တွေကိုအသစ်အဆန်း၏အစောဆုံးခန့်မှန်းအားဖြင့်သာတည်ကြောင်း hippocampal plasticity တစ်ခု SN / VTA-သွေးဆောင်တိုးမြှင့်ထည့်သွင်းရန်ဤတွေ့ရှိချက်များတိုးချဲ့။ စိတ်ဝင်စားစရာဦးရေပြားအသံသွင်းရာမှမကြာသေးမီ electrophysiological ဒေတာ (မကြာမီကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အသစ်တစ်ခုကိုနှိုးဆွ၏စတင်ခြင်းနှင့် Episode မှတ်ဉာဏ်ရှေ့ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအကြားဆက်ဆံရေးကိုမီးမောင်းထိုးပြOtten et al ။ , 2006) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာအသစ်အဆန်း၏မျှော်လင့် prestimulus လှုပ်ရှားမှုလှုံ့ဆော်မှု encoding က modulate နိုင်သည့်မှတဆင့်တဦးတည်းယန္တရားဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ကိုလည်း (အနေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ၏ဆုလာဘ်မျှော်မှန်းခြင်းနှင့်မျှော်လင့်မှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးတက်စေရန်တွေ့ရှိခဲ့သည်ဘယ်မှာမကြာသေးမီ fMRI data တွေကိုတိုးချဲ့Adcock et al, 2006 ။ Mackiewicz et al ။ , 2006).
အဆိုပါ SN / VTA အတွက်ဆုလာဘ်များနှင့်အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့အကြားအလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ခန္ဓာဗေဒထပ်နေသည်ကိုကောင်းစွာအသစ်သောအစားအစာအရင်းအမြစ်များကိုရှာဖွေသူတို့၏တည်နေရာဝှက်, အားဖြင့်အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအတွက်တိုးမြှင့်ဖို့တိရိစ္ဆာန်များအားဖွင့်, ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးအပြုအမူအားဖြည့်ရန်အစေခံခြင်းငှါ, ။ အနာဂတ်သုတေသနစိတ်ဝင်စားစရာ Avenue အသစ်အဆန်းမျှော်လင့်ပြီးအသစ်အဆန်း-ရှာကြံကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရိုအကြားဆက်ဆံရေးကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရလိမ့်မည်။ လူသားမြားသညျတှငျ, တိုးမြှင့်အသစ်အဆန်း-ရှာ (လောင်းကစားဝိုင်းနှင့်စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်သည်Spinella, 2003; Hiroi နှင့် Agatsuma, 2005မှတ်ဉာဏ်အတွက်အသစ်အဆန်းမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်စွဲနှင့်ပတ်သက်။ ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများအကြားအကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုများအကြားအပေးအယူ၏ဖြစ်နိုင်ခြေမြှင့်။ အသစ်ထပ်မံမျှော်လင့်ခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အသစ်ရှာဖွေခြင်းတို့အကြားဆက်နွယ်မှုကိုပိုမိုနားလည်ခြင်းသည်ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့် schizophrenia ကဲ့သို့သော dopaminergic ကမောက်ကမဖြစ်မှုတွင်တွေ့ရှိရသောမှတ်ဥာဏ်လိုအပ်ချက်များကိုလည်းသုတေသနပြုနိုင်သည်။
ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ Single-ဆဲလ်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများမှာ SN / VTA မျှော်လင့်မထားတဲ့ဆုလာဘ်အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ခန့်မှန်းဆုချမှတုံ့ပြန်သောလေ့လာရေး (ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ '' ယာယီခြားနားချက် '(TD) မော်ဒယ်များမှုတ်သွင်းထားပါတယ်Schultz, 1998, 2002) ။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုအတွက်အသစ်အဆန်းမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်မမျှော်လင့်ဘဲအသစ်အဆန်းများအတွက် fMRI တက်ကြွစွာ SN / VTA အတွင်းအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောဝေမျှတည်ရှိသောခဲ့ကြသည်, ထိုမှတ်သားရပါမည်။ ဤသည်အဖြစ်ကောင်းစွာတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်မျှော်လင့်မထားတဲ့ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှုအကြားဒေသဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ဖြစ်အံ့သောငှါဖြစ်နိုင်ခြေပေါ်ပေါက်ခြင်း, အသစ်အဆန်းမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်မမျှော်လင့်ဘဲအသစ်အဆန်း၏ Single-အာရုံခံဆဲလျလေ့လာမှုများကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာတွင် neuron တုံ့ပြန်မှုဟာ SN ၏ကွဲပြားခြားနားသောဝေမျှအတွင်းတည်ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းပြသအံ့သောငှါ / VTA ။ ဒီနေရာမှာတစ်ဦးကအသိပေးချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုအတွက်အသစ်အဆန်းခန့်မှန်းဖို့တုန့်ပြန်သောတူညီအာရုံခံလူဦးရေလည်းမမျှော်လင့်ဘဲအသစ်အဆန်းမှတုန့်ပြန်သောဖြစ်နိုင်ခြေဖယ်မပေးနိုငျသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။
အချုပ်အားကျွန်ုပ်တို့၏ fMRI အချက်အလက်များကို hippocampal ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် SN / VTA အသစ်အဆန်းများခန့်မှန်းခြင်းနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာအစေခံကဖော်ပြသည်။ အဆိုပါ SN / VTA ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့် hippocampus ပေးထားသောအခြေအနေတွင်အသစ်အဆန်း၏မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ရှိနေခြင်း process လုပ်တယ်။ အတူတကွကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုအမူဒေတာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်လာမည့်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုတိုးမြှင့်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးဖို့ prestimulus အဆင့်ဆောင်အတွက်အသစ်အဆန်း၏အစောဆုံးခန့်မှန်းဖို့ SN / VTA နှင့် hippocampus ၏သော coactivation အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ဆုလာဘ်များနှင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအသစ်အဆန်းများအပြောင်းအလဲနဲ့အကြားအနီးကပ်ဆက်ဆံရေးသက်သေအထောက်အထားများကို dopaminergic-hippocampal အပြန်အလှန်၏မကြာသေးမီမော်ဒယ်များကိုတိုးချဲ့ပါ။ သူတို့က Episode encoding ကများအတွက် prestimulus ကာလ၏အရေးပါမှုကိုထင်ရှားစေပါသည်။ encoding ကပေါ်အသစ်အဆန်း၏ဆိုးကျိုးများထို့ကြောင့် dopaminergic midbrain ဒေသများထံမှ modulatory လွှမ်းမိုးမှုကကမကထပြုခဲ့သည့် medial ယာယီမှတ်ဉာဏ်စနစ်တခု anticipatory ပြည်နယ်၏ induction အပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် fMRI data တွေကိုသီးခြား neurotransmitter စနစ်များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုများအတွက်တိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားမပေးပါဘူး။ သို့ရာတွင် fMRI သညျလူသားတို့အတွက် SN / VTA အတွက်အဖြစ်အပျက်-ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တန်ဖိုးရှိသောကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ neuroimaging သို့မော်လီကျူးဗီဇချဉ်းကပ်၏ပေါင်းစည်းမှု (Schott et al ။ , 2006) နှင့် pharmacological fMRI နောက်ထပ်လူ့အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့် SN / VTA တုံ့ပြန်မှုများနှင့် dopaminergic neurotransmission အကြားဆက်ဆံရေးအတွက် neuromodulatory transmitter ကိုစနစ်များ၏အခန်းကဏ္ဍ elucidate ဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
ဤလုပ်ငန်းကိုအဆိုပါ Deutsche Forschungsgemeinschaft (KFO [မှတ်ဉာဏ်, TP3 ၏သိမှုထိန်းချုပ်ရေး]) မှထောက်ပံ့ငွေကထောက်ခံခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ fMRI စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့နှင့်အတူအကူအညီအတွက် fMRI ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် Kerstin Möhring, Ilona Wiedenhöftနှင့် Claus Tempelmann နှင့်အတူအကူအညီအတွက် fMRI ဒီဇိုင်း, Kolja Schiltz နှင့်အတူအကူအညီအတွက်မိုက်ကယ် Scholz ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Adcock RA, Thangavel အေ, Whitfield-Gabrieli အက်စ်, Knutson ခ, Gabrieli JD ဆုကြေး-လှုံ့ဆော်မှုသင်ယူမှု: mesolimbic activation မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေး precedes ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2006; 50: 507-517 ။ [PubMed]
Aggleton JP, ဇာတ်လမ်းတွဲနှင့်အသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်အဘို့အဘရောင်းမဂ္ဂါဝပ် Interleave ဦးနှောက်စနစ်များကို။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ။ 2006; 10: 455-463 ။ [PubMed]
Bevins RA, ဝတ္ထုတ္ထုမှဝင်ရောက်ခွင့်အားဖြင့်အရပ်ဌာန preference ကိုအတွက် Bardo MT အေးစက်တိုး: MK-801 အားဖြင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 1999; 99: 53-60 ။ [PubMed]
Blumenfeld ခ, Preminger အက်စ်, Sagi ဃ, အသစ်အဆန်း-facilitated Synaptic plasticity နှင့်အတူကွန်ရက်မှာမှတ်ဉာဏ်ကိုယ်စားပြု၏ Tsodyks အမ် Dynamics ကို။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2006; 52: 383-394 ။ [PubMed]
Brett, အမ်, 1999 ။ http://imaging.mrc-cbu.cam.ac.uk/imaging/MniTalairach (2007-08-08 ၏အဖြစ်) ။
ဘရူ JB, Zhao နှင့် Z. , Desmond je, ဂလိုဗာ GH, Gabrieli JD အမှတ်တရများ Making: အမြင်အာရုံအတှေ့အကွုံကိုအောကျမေ့ပါလိမ့်မည်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းခန့်မှန်းကြောင်းဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု။ သိပ္ပံ။ 1998; 281: 1185-1187 ။ [PubMed]
Bunzeck N. , လူ့ substantia Nigra / VTA အတွက်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအသစ်အဆန်း၏ Duzel အီး Absolute နိုင်တဲ့ coding ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2006; 51: 369-379 ။ [PubMed]
Daffner KR, Mesulam MM, Scinto LF, Acar ဃ, Calvo V. , Faust R. , Chabrerie အေ, ကနေဒီခ, Holcomb P. ဝတ္ထုဖြစ်ရပ်များမှအာရုံစူးစိုက်မှုကို directing အတွက် prefrontal cortex ၏ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍ။ ဦးနှောက်။ 2000; 123: 927-939 ။ [PubMed]
Daselaar သည် SM, Fleck က MS, အ medial ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေးအတွက် Cabeza RE Triple dissociation: စာမျက်နှာ, ကျွမ်းနှင့်အသစ်အဆန်း။ ဂျေ Neurophysiol ။ 2006; 31: 31 ။ [PubMed]
Duzel အီး, Vargha-Khadem အက်ဖ်, Heinz HJ, အသိအမှတ်ပြုမှုများအတွက် Mishkin အမ်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအထောက်အထားစာမျက်နှာမပါဘဲအစောပိုင်း hippocampal ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပြီးနောက်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 2001; 98: 8101-8106 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Duzel အီး, Habib R. , Rotte အမ်, Guderian အက်စ်, Tulving အီး, Spatial နှင့် nonspatial လှုံ့ဆော်မှု configurations များအတွက်အမြင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်စဉ်အတွင်း Heinz HJ လူ့ hippocampal နှင့် parahippocampal လှုပ်ရှားမှု။ ဂျေ neuroscience ။ 2003; 23: 9439-9444 ။ [PubMed]
Eckert T. , Sailer အမ်, Kaufmann ဂျေ, Schrader C. , Peschel တီ, Bodammer N. , Heinze HJ, Schoenfeld MA idiopathic ပါကင်ဆန်ရောဂါကွဲပြားခြားနားမှု, စနစ်များစွာ atrophy, တိုးတက်သော supranuclear သွက်ချာပါဒနှင့် magnetization လွှဲပြောင်းပုံရိပ်သုံးပြီးကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု ။ NeuroImage ။ 2004; 21: 229-235 ။ [PubMed]
Ennaceur အေ, ကြွက်များတွင်မှတ်ဥာဏ်၏ neurobiological လေ့လာမှုများအဘို့အ Delacour ဂျေအသစ်တရုံးတင်စစ်ဆေးစမ်းသပ်: 1 ။ အမူအကျင့်ဒေတာ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 1988; 31: 47-59 ။ [PubMed]
Frey U. , Schroeder အိပ်ချ်, Matthies အိပ်ချ် Dopaminergic ရန်ကြွက် hippocampal ချပ်၏ CA1 ဒေသတွင်း၌ posttetanic LTP ၏ရေရှည်ထိန်းသိမ်းမှုတားဆီး။ ဦးနှောက် Res ။ 1990; 522: 69-75 ။ [PubMed]
Frey U. , Matthies အိပ်ချ်, Reymann ကီလိုဂရမ်စသည်တို့အတွက်ကြွက် CA1 ဒေသအတွင်းရေရှည်အလားအလာဟူသောအသုံးအနှုနျးအပျေါ tetanization စဉ်အတွင်း dopaminergic D1 အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ neuroscience ။ လက်တ။ 1991; 129: 111-114 ။ [PubMed]
Friston KJ, ဖလက်ချာ P. , ယောသပ် O. , ကေတီဟုမ်းအေ, Rugg MD, Turner R. Event-related fMRI: characterizing differential ကိုတုံ့ပြန်မှု။ NeuroImage ။ 1998; 7: 30-40 ။ [PubMed]
Geng DY, Li YX, ပါကင်ဆန်ရောဂါခံစားနေရသောလူနာများတွင် Basal ganglia nuclei နှင့် substantia nigra ၏ Zee CS သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုဖြင့်ပုံရိပ်အခြေပြု volumetric analysis ။ အာရုံကြောခွဲစိတ်။ 2006; 58: 256-262 ။ (ဆွေးနွေးချက် ၂၅၆-၂၆၂) [PubMed]
Hinrichs အိပ်ချ်, Scholz အမ်, Tempelmann C. , Woldorff MG, Dale AM ​​မြန်ဆန်-နှုန်းကိုစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းများအတွက်အဖြစ်အပျက်-ဆက်စပ် fMRI တုံ့ပြန်မှု၏ Heinz HJ Deconvolution: ခြေရာခံခြင်းလွှဲခွင်များပါတယ်။ ဂျေ Cogn ။ neuroscience ။ 2000; 12 (ပျော့ပျောင်း 2): 76-89 ။ [PubMed]
Hiroi N. , ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုဖို့ Agatsuma အက်စ်မျိုးဗီဇလွယ်ကူစွာထိခိုက်။ Mol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 10: 336-344 ။ [PubMed]
Huang က YY, Kandel ER D1 / D5 အဲဒီ receptor agonists အဆိုပါ hippocampus ၏ CA1 ဒေသအတွက်ပရိုတိန်းပေါင်းစပ်-မှီခိုနှောင်းပိုင်းတွင်အလားအလာသွေးဆောင်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 1995; 92: 2446-2450 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဂျေး TM အလိုအလျောက် Dopamine: Synaptic plasticity နှင့်မှတ်ဉာဏ်ယန္တရားများများအတွက်အလားအလာအလွှာဟာ။ prog ။ Neurobiol ။ 2003; 69: 375-390 ။ [PubMed]
ယောသပ်သည် O. , Henson RN Event-related အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်: မော်ဒယ်, အခြနှင့် optimization ။ ဖီလို။ ဖြတ်ကျော်။ R ကို Soc ။ Lond ။ , B, Biol ။ သိပ္ပံ။ 1999; 354: 1215-1228 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Klebaur je, Phillips က SB, ကယ်လီ TH, ဝတ္ထုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုမှ Bardo MT Exposure ကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေပါသည်။ Exp ။ Clin ။ Psychopharmacol ။ 2001; 9: 372-379 ။ [PubMed]
Knutson ခ, ဆုလာဘ်ခန့်မှန်း၏ Cooper က JC Functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်။ Curr ။ Opin ။ Neurol ။ 2005; 18: 411-417 ။ [PubMed]
Knutson ခဒမ် CM, Fong သည် GW, တိုးပွားလာငွေကြေးဆုလာဘ်၏ Hommer ဃရှိလာရွေးချယ်နျူကလိယ accumbens စုဆောင်းလေ့ကျင့်။ ဂျေ neuroscience ။ 2001; 21 (RC159): 1-5 ။ [PubMed]
Knutson ခ, Fong သည် GW, အဒမ် CM, Varner JL, အဖြစ်အပျက်-ဆက်စပ် fMRI နှင့်အတူဆုလာဘ်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ရလဒ်၏ Hommer ဃ Dissociation ။ NeuroReport ။ 2001; 12: 3683-3687 ။ [PubMed]
Kumaran ဃ, ဖြစ်ရပ်များ၏ Maguire EA ၏မျှော်လင့်မထားသော sequence ကို: လူ့ hippocampus အတွက်မတိုက်ဆိုင်ထောက်လှမ်း။ PLoS Biol ။ 2006; 4: e424 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lancaster JL, Woldorff MG, Parsons LM, Liotti အမ်, Freitas CS, Rainey L. , Kochunov PV, Nickerson ဃ, Mikiten လုပ် SA, Fox က PT Automated Talairach အလုပ်လုပ်တဲ့ဦးနှောက်မြေပုံအဘို့အတံဆိပ်များ atlas ။ Hum ။ ဦးနှောက် Mapp ။ 2000; 10: 120-131 ။ [PubMed]
သံပုရာ N. , Manahan-Vaughan ဃ Dopamine D-1 / D-5 တံခါးဝ hippocampal ရေရှည်အလားအလာများနှင့်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါမှတစ်ဆင့်ဝတ္ထုအချက်အလက်များ၏ဝယ်ယူ receptors ။ ဂျေ neuroscience ။ 2006; 26: 7723-7729 ။ [PubMed]
Lisman je, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကိုအဆိုပါ hippocampal-VTA ကွင်းဆက်: ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်သို့အချက်အလက်များ၏ entry ကိုထိန်းချုပ်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 46: 703-713 ။ [PubMed]
Ljungberg တီ, Apicella P. , အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုများလေ့လာသင်ယူနေစဉ်အတွင်းမျောက် dopamine အာရုံခံ၏ Schultz ဒဗလျူတုံ့ပြန်ချက်။ ဂျေ Neurophysiol ။ 1992; 67: 145-163 ။ [PubMed]
Lupien SJ, အီဗန်အေ, သခင် C. , မိုင်ဂျေ, Pruessner အမ်, ပိုက်ခ, Pruessner JC Hippocampal အသံအတိုးအကျယ်အဟောင်းတွေလူကြီးများကာလ၌ရှိသကဲ့သို့ငယ်ရွယ်အတွက် variable ကိုကဲ့သို့ဖြစ်၏: လူသားတွေအတွက် hippocampal ကျုံ့၏အယူအဆအဘို့အဂယက်ရိုက်။ NeuroImage ။ 2007; 34: 479-485 ။ [PubMed]
Mackiewicz KL, Sarinopoulos ဗြဲ, Cleven KL, Nitschke JB မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်ဉာဏ်အတွက် amygdala နှင့် hippocampus function ကိုများအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုများ၏တိကျသော၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 2006; 103: 14200-14205 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
အဓိကအရသာဆုလာဘ်ကိုမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း O'Doherty JP၊ Deichmann R. , Critchley HD, Dolan RJ အာရုံကြောဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ။ Neuron ။ 2002; 33: 815-826 ။ [PubMed]
Otten LJ, Quayle AH, Akram အက်စ်, Ditewig က TA, Rugg MD ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုနောက်ပိုင်းတွင်စာမျက်နှာဟောကိန်းထုတ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမီ။ နတ်။ neuroscience ။ 2006; 9: 489-491 ။ [PubMed]
Ranganath C. , ဝတ္ထုဖြစ်ရပ်များဖော်ထုတ်မယ်နှင့်သတိရဘို့ Rainer G. အနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောယန္တရားများ။ နတ်။ ဗျာ, neuroscience ။ 2003; 4: 193-202 ။ [PubMed]
ရိဒ် P. , Mitchell က C. , Nokes တီအခ်ါတစ်ဦးဆာပ Two-လီဗာခွဲခြားဆက်ဆံမှု task ထဲမှာ putatively ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုများ၏ဂုဏ်သတ္တိများအားဖြည့်။ Animation ။ လေ့လာပါ။ ပြုမူနေ။ 1996; 24: 38-45 ။
Sajikumar အက်စ်, Frey Ju နှောင်းပိုင်း-Association, Synaptic မှတ်သားခြင်းနှင့် LTP နှင့်, LTD စဉ်အတွင်း dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Neurobiol ။ လေ့လာပါ။ Mem ကို။ 2004; 82: 12-25 ။ [PubMed]
Schott BH, Sellner DB, Lauer CJ, Habib R. , Frey Ju, Guderian အက်စ်, Heinz HJ, midbrain အဆောက်အဦများ၏ Duzel အီး Activation ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အသစ်အဆန်းများနှင့်လူသားတွေအတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမှတ်ဉာဏ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လေ့လာပါ။ Mem ကို။ 2004; 11: 383-387 ။ [PubMed]
Schott BH, Seidenbecher CI, Fenker DB, Lauer CJ, Bunzeck N. , Bernstein HG, Tischmeyer ဒဗလျူ, Gundelfinger ED, Heinz HJ, Duzel အီးလူ့ Episode မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် dopaminergic midbrain ပါဝင်သူ: မျိုးရိုးဗီဇပုံရိပ်ကနေသက်သေအထောက်အထား။ ဂျေ neuroscience ။ 2006; 26: 1407-1417 ။ [PubMed]
Schultz dopamine အာရုံခံ၏ဒဗလျူခန့်မှန်းဆုလာဘ် signal ကို။ ဂျေ Neurophysiol ။ 1998; 80: 1-27 ။ [PubMed]
Schultz ဒဗလျူ, Apicella P. , Scarnati အီး, ဆုလာဘ်၏မြော်လင့်ခြင်းမှဆက်စပ်မျောက် ventral striatum အတွက် Ljungberg တီအာရုံခံလှုပ်ရှားမှု။ ဂျေ neuroscience ။ 1992; 12: 4595-4610 ။ [PubMed]
Schultz ဒဗလျူဒါယန်းပီ, ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်၏ဂူ PR စနစ်တစ်ဦးကအာရုံကြောအလွှာဟာ။ သိပ္ပံ။ 1997; 275: 1593-1599 ။ [PubMed]
Shuler MG, မူလတန်းအမြင်အာရုံ cortex အတွက်ထမ်းရွက် MF ဆုကြေးအချိန်ကိုက်။ သိပ္ပံ။ 2006; 311: 1606-1609 ။ [PubMed]
Spinella အမ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မတိုက်ဆိုင်, အာရုံကြောဆုလာဘ်ဆားကစ်များနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း။ int ။ ဂျေ neuroscience ။ 2003; 113: 503-512 ။ [PubMed]
Stansfield KH သည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်အပြုအမူအပေါ်အသစ်အဆန်း၏ Kirstein CL အကျိုးသက်ရောက်မှု။ dev ။ Psychobiol ။ 2006; 48: 10-15 ။ [PubMed]
Talairach ဂျေ, Tournoux P. Thieme; နယူးယောက်: 1988 ။ လူ့ဦးနှောက်၏ co-ပြို Stereotaxic Atlas ။
Tulving အီးမှတ်ဉာဏ်နှင့်သတိ။ နိုင်သလား။ Psychol ။ 1985; 26: 1-12 ။
Vargha-Khadem အက်ဖ်, Gadian DG, Watkins Ke, Connelly အေ, ဗန် Paesschen ဒဗလျူ, Episode နှင့် semantic မှတ်ဉာဏ်အပေါ်အစောပိုင်း hippocampal ရောဂါဗေဒ၏ Mishkin အမ် Differential ဆိုးကျိုးများ။ သိပ္ပံ။ 1997; 277: 376-380 ။ [PubMed]
Wittmann ဘီစီ, Schott BH, Guderian အက်စ်, Frey Ju, Heinz HJ, dopaminergic midbrain ၏ Duzel အီးဆုကြေး-ဆက်စပ် FMRI activation တိုးမြှင် hippocampus-မှီခိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 45: 459-467 ။ [PubMed]
Yonelinas AP, Dobbins ဗြဲ, Szymanski MD, Dhaliwal HS, အသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်ဘုရင်အယ်လ် Signal-detection စနစ်, တံခါးခုံများနှင့် Dual-ဖြစ်စဉ်ကိုမော်ဒယ်များ: ROCs နှင့်သတိစာမျက်နှာ။ သတိ။ Cogn ။ 1996; 5: 418-441 ။ [PubMed]
Yonelinas AP, Kroll NE, Quamme JR, Lazzara MM, Sauve MJ, Widaman KF, စာမျက်နှာနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းအပေါ်ကျယ်ပြန့်ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျော့ hypoxia ၏ Knight ဟာ RT ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ နတ်။ neuroscience ။ 2002; 5: 1236-1241 ။ [PubMed]